Sakariyiinta waxay dhahaan 'Nidaamka tareenka waa qasab' | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara54 SakaryaSakariyiinta waxay dhahaan 'Nidaamka tareenka waa qasab'
11 / 10 / 2019 54 Sakarya, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, taraamka
Nidaamka tareenka ee sakaryalilar wuxuu leeyahay sart
Kordhinta dadweynaha iyo horumarinta maalin kasta oo dhaafaya, dhibaatada ugu weyn ee Sakarya waxay muujineysaa in muwaadiniinta taraafikada, xalka kaliya uu yahay nidaamka tareenka, ayuu yiri. Muwaadiniinta sheeganaya inay ka daaheen nidaamka tareenka, waxay falcelin ka sameeyeen Metropolitan.
Iyada oo ay sii kordhayaan tirada dadka magaalo walba ee dhaafaya, iyo sidoo kale tirada gawaarida oo korodhay, dhibaatada taraafikada ayaa bilaabeysa inay tartiib tartiib tartiib u korto. Ugu dambeyntiina, Duqa Magaalada Ekrem Yüce, kadib safarkiisii ​​South Korea, nidaamka tareenka wuxuu mar kale dul fadhiyaa ajendaha magaaladeena. Muwaadiniinta dhinaca kale, nidaamka tareenka wuxuu ku dari doonaa hawo gaar ah gobolkeena, sidoo kale aragtida gaadiidku waxay bixin doontaa gargaar.
IRR Wuxuu magaalo siiyaa "
Erhan Tekbaş; Xaqiiqdii waxaan jeclaan lahaa inaan imaado magaalada oo hawada siisa dadka ka yimaada dibedda oo qurux u siiya nidaamka tareenka labaad, labadaba shidaal iyo koronto ma gubanayaan, taasi waa nostalgia fiican, sidaa darteed waxaan u maleynayaa inay tahay wax wanaagsan. Mashruucan ayaa runti aad u soo daahay Sakarya. Wax kasta oo kuxiran qorsheynta magaalada Adapazarı'n ee hoos imanaya shuruudaha nidaamka habka tareenka halkan marayo ma ogi. Haddii ay ku aflagaadeyn doonaan qolka dhibaatada waxay u baahan yihiin inay sameeyaan wax ku habboon isaga, nidaamku wuxuu umuuqdaa mid adag. Xitaa hadda taraafikada gawaaridu waa mushkilad weyn halkaan dhig nidaamka tareenka oo taraafikada ayaa noqota dhibaato weyn. Marka laga hadlayo qiimaha, u maleyn maayo in nidaamka tareenka uu saameyn doono basaska yar yar marka loo eego qiimaha. ”
Necati Saddexaad wuxuu yiri: “Waxaan u maleynayaa gaadiidku inay fiican yihiin. Gawaarida ay sameysay basasku waa la yareeyay. Amarka ayaa yimid magaalada. Waxaan u maleynayaa in mashruucan la hirgalin doono sida ugu dhaqsaha badan dhibaatada taraafikada looga xallin doono khaas ahaan masaajidka Masjidka cusub. Sababtoo ah, xitaa Duzce, nidaamkani waa inuu ku dhisnaado magaalo sida Sakarya. Gaadiidku waa raaxo maxaa yeelay taraafikada magaalada ayaa aad u mashquul badan. ”
"LA SOO DHAWEYNTA MAGAALADA"
Atif Waxaan jeclaan lahayn in nidaamka tareenka uu yimaado sababtoo ah wax aad u soo daahay waa dowlad la'aan haddii aysan horay sidan u jirin. Nidaamkani wuxuu dejinayaa Magaalada. Sababtoo ah maahan in qof walba uu doonayo inuu soo galo inta badan gawaaridooda gaarka loo leeyahay. Dadka halkan jooga waxay si sahlan u heli karaan nidaamka tareenka magaalada. Qiimayaashu waa hubaal inay hadda ka dib dhici doonaan, marka loo eego qiimaha iyo wasakhowga hawada.
TAM WAQTI OO SAMEEYSO HALKAN ”
Sebahattin Yavuz; Sistem Imaatinka nidaamka tareenka, waxay noqon laheyd raaxo inaad si fudud u socoto. Waxaan u tagi jirnay meel aan dooneynay, marka waxaan dooneynaa inay taasi dhacdo. Wax walba ayaa la samayn karaa hadda waqtiga saxda ah ee ay adkaan lahayd haddii nidaamka tareenka uu hore u soo baxo. Haddii la sameeyo, taraafikada ayaa hoos u dhacaysa maalin kasta oo dhaafaysa. Haddii jidku qurux badan yahay, waxay yeelan doontaa saameyn wanaagsan. Haddii kale, dabcan way adkaan doontaa. ”
"MA Noqon Doono Dhibaatooyin Dhibaatooyin"
Mehmet Erdem wuxuu yiri: “Gaadiidka dad weynaha aad ayey u fududaan doonaan, dadku way imaan doonaan wayna ka jaban yihiin. Dadku way iman doonaan oo si raaxo leh ayay u tegi doonaan. Dadku way is dejin doonaan, sidaa darteed nidaamkani mar hore wuu soo daahay. Maaddaama ay tahay degmo maalgelin ku sameysa meelo kale, maalgashigu waxay tagayaan meelo kala duwan. In deyn Sakarya 3 Turkey ee. Inta aan ka warqabo, degmada ugu qaalisan ee la leeyahay sidaas awgeed ma aha mustaqbalka nidaamkan. Waxaan u malaynayaa khadadka halkan laga dhisi doono inay noqon doonaan sida terminal waqooyiga, waxay kuxirantahay meesha wax yar oo taraafikada ah lagu cadaadin karo. Ninku wuxuu dhaafi doonaa tareen dheer sidaa daraadeed saameyn ku yeelasha taraafikada. Dhanka qiimaha, dolmusçıların ma xanaaqin maxaa yeelay qiimaha baatroolka ayaa yimid dadkuna waxay cunaan rooti ka dib dhammaan xNUMX x. Waxaa laga yaabaa inaysan qiimo dhimis kuu sameynin. Maaddaama tani ay noqonayso degmadu, nidaamkayga tareenka ayaa laga yaabaa inuu ku habboon yahay. Maaddaama dadku ay door bidayaan nidaamka tareenka, basaska yar yar waxay jebin karaan qiimaha laakiin waxay u jebin karaan ilaa xad. Waxay leeyihiin kharashyo. Waa wax u wanaagsan shacabka laakiin waxaay dhaawici karaan baska. ”(Şevval Geçin - Ferhat Bayraktar - Sakarya Yenihaber)
Nidaamka Isku-xirka Samsun Tender si loo isu-beddelo Qaybta Bulshada